Iyini intela ebanjisiwe yeCannabis Cultivation Privilege tax e-Illinois?
I-Cannabis Cultivation Privilege Taxilege tax kanye neCannabis Purifer Exise tax i
Intela yelungelo lokulima insangu - Uthini umthetho ngentela yelungelo lokutshala insangu kanye nentela yemali yomthengi ye-cannabis e-Illinois?
Uthini umthetho mayelana nentela yokulima insangu kanye nomthengi we-cannabis?
Isigaba 60 nesama-65 sibhidliza indlela intela ebekwe ngayo emabhizinisini e-cannabis e-Illinois. Isigaba 60 sikhuluma ngeCannabis Cultivation Privilege tax e-Illinois, echaza ukuthi kukhokhiswa intela engakanani, imiphi imikhiqizo efanelekile yentela nokuthi kwenziwa kanjani izinkokhelo futhi ibuyisa abafaki be-cannabis. Isigaba 65, ngakolunye uhlangothi, sichaza i-Cannabis Purchaser Excise tax e-Illinois, ukuthi ifaka ini nokuthi iqoqwa kanjani kubathengi be-cannabis.
Funda kabanzi ukuze ufunde kabanzi ngezindatshana ze-Articles 60 & 65 e-Illinois.
Kusukela ngosuku lokuqala lukaSepthemba 2019, kuzokhokhiswa intela enkulukazi engu-7% yokutshala insangu ekuthengisweni kokuqala kwama-cannabis ngabalimi e-Illinois. UMnyango Wezezimali ugcina ilungelo lokunquma inani lentengo ye-cannabis lapho;
(i) Umthengisi nomthengi izinhlangano ezihambelana nazo
(ii) Ukudluliswa kwensangu akuyona into eyenziwe ngengalo
(iii) Umthengi udlulisela i-cannabis enhlanganweni yakhe yokusabalalisa noma ukweqa okuthi inani le-cannabis lingasungulwa.
Le ndatshana ibuye iveze ukuthi intengo ebekwe nguMnyango kufanele ihambisane nenani leminye imikhiqizo enekhwalithi efanayo, umlingiswa nokusetshenziswa kwendawo. Futhi uma ingekho imikhiqizo enjalo, uMnyango ungacubungula imikhiqizo ezifundeni ezahlukahlukene ze-Illinois.
Ngaphansi kwe-Cannabis Cultivation Privilege tax e-Illinois, kungumsebenzi womuntu owenza umthengisi wokuqala (umlimi) ukukhokha intela ebekiwe. Abathengi abalandela njengezinhlangano zokucubungula abanalungelo lokukhokha le ntela. Umthetho, kepha, uvumela abalimi ukuthi bazikhokhele ngokwabo ngokukhokhisa isikweletu esengeziwe emananini abo.
Bonke abalimi be-cannabis abakhokha intela yenhlanhla yokulinywa kwe-cannabis e-Illinois bayacelwa ukuthi bafake izicelo zokuthola isitifiketi ngomnyango wentela. Lezi zicelo kumele zenziwe online ngokwezidingo zoMnyango.
Kubalulekile futhi ukuqaphela ukuthi kuphela abafaka izicelo abanamalayisense ngaphansi kweCannabis Regulation and tax Act abangakwazi ukunikezwa isitifiketi.
Ukubuyiswa nokukhokhwa kwentela ye-Cannabis Cultivation Privilege
Abantu, abakhokha intela yenhlanhla yokulinywa kwe-cannabis e-Illinois, bayacelwa ukuthi babuyise noma ngaphambi kwawo wonke ama-20 ngenyanga eyandulele. Ukubuyisa kufanele kusho:
(1) Igama lomkhokhi wentela;
(2) Ikheli lomkhokhi wentela, kanye nekheli lebhizinisi;
(3) Amarisidi athengiswa njalo ngenyanga e-cannabis enyangeni edlule;
(4) Inani elitholwe ngokuthengisa kwesikhathi;
(5) Ukuncishiswa njengoba kudingwa ngumthetho;
(6) Amarisidi aphelele enyanga elandela inyanga yokugcwalisa okufanele isetshenziselwe ukubala intela;
(7) Inani lentela elikweletwayo;
(8) Isiginesha yomkhokhi wentela; futhi
(9) Noma yimiphi eminye imininingwane njengoba ingafunwa ngumnyango.
Yonke imbuyiselo nezinkokhelo kufanele zenziwe nge-elektroniki. Abakhokhintela abakuthola kunzima ukukhokha nge-elekthronikhi bangafaka isicelo soMnyango sokuncishiswa kwepulatifomu kagesi.
Abakhokhi bentela abanjena bangahle bacelwe ukuthi bafayele ukubuyisa kwabo ngokwehlukana noma bayihlanganise nembuyiselo yentela ngaphansi koMthetho Wokusebenzisa Okuphathelene Ne-Cannabis Pilot Program.
Abakhokhintela bayadingeka ukuthi benze inkokhelo njalo ngekota ngomhla ka-7, 15, 22, nosuku lokugcina lwenyanga ngayinye. Uma okhokha intela ehluleka ukwenza izinkokhelo zekota ngesikhathi noma ekhokha imali engaphansi kwaleyo edingekayo, angabhekana nezinhlawulo noma izinzalo. Uma kwenzeka imali ekhokhiwe idlula isikweletu sentela esidingekayo, umuntu angacela imemorandamu yesikweletu ngaphambi kokuphela kwezinsuku ezingama-30 ngemuva kosuku lokukhokha.
Yonke imali ekhokhelwa intela yenhlanhla yokulinywa kwe-cannabis idluliselwe esikhwameni seCannabis Regulation Fund.
Yini iConstituns Cannabis Conschas Excise tax e-Illinois?
Intela yeCannabis Purchaser Excise tax e-Illinois izoqala ukukhokhiswa ngoJanuwari 1, 2020. Intela izokhokhwa kubathengi be-cannabis ngamanani ahlukile ngokulandelayo;
(1) Noma iyiphi i-cannabis, ngaphandle komkhiqizo ofakwe insnabis, enezinga le-delta-9-tetrahydrocannabinol elilungisiwe noma ngaphansi kwama-35% izothola intela ezoba ngu-10% wezindleko zensangu.
(2) Noma iyiphi i-cannabis, ngaphandle komkhiqizo ofakwe insnabis, enezinga le-delta-9-tetrahydrocannabinol elilungisiwe ngaphezulu kwe-35% izokwengeza intela ezoba ngu-25% wezindleko zensangu .; futhi
(3) Umkhiqizo ofakwe insangu uyobizwa intela engama-20% yenani lokuthenga.
Iqoqwa Kanjani Intela YaseCannabis e-Illinois Eqoqwe
Ngokusho kwesenzo, intela yomthengi ethe xaxa iqoqwa ngabathengisi. Lokhu bakwenza ngokungeza isikweletu sentela entweni abathengi abayikhokhayo ukuthola insimbi yomthengisi.
Inani lentela eliqoqiwe likhokhiswa ngamanani ashiwo ngenhla, okufanele abuyiselwe eMnyangweni wezezimali.
Uma umthengisi ekhokhisa umthengi intela eningi kunalokho kudingwa i-Cannabis Purchaser Excise tax e-Illinois, umthengi unelungelo lokucela ukubuyiselwa imali. Futhi ezimweni lapho umthengi engakhokhiswa intela, umthengi kufanele enze inkokhelo ngomhla ka-20 noma ngaphambi kwenyanga elandelayo yenyanga yokuthenga.
Ngokomthethosisekelo, kungumsebenzi womthengisi ukuqoqa intela yeCannabis Purchaser Excise tax e-Illinois. Ukuthi umthengisi we-cannabis uqoqa intela noma cha, yonke intela obekufanele iqoqwe izosiguqulela esikweletini okufanele ukuthi umthengi asikhokhele umbuso.
Ukubhaliswa Kwabahwebi Base-Cannabis
Bonke abathengisi abaqoqa intela ngaphansi komthetho weCannabis Regulation and tax Act kumele bafake isicelo sobuchwepheshe ukuze bathole isitifiketi.
Umthethosisekelo uthi ukuze abathengisayo bafaneleke ukuthola izitifiketi, kufanele babe namalayisense.
Ikhadi lokuhlonza umenzeli wesikhungo sokulima
Lokhu kungumbhalo ohlonishwayo ozonikezwa abahlinzeki bezikhungo zokulima ababhekele ukuphatha nokuqinisekisa ukuthi lezi zikhungo zihambisana nomthetho. Lo mbhalo uzokhishwa nguMnyango Wezolimo.
Wonke umthengisi uyadingeka ukuze agcine irekhodi elinembile le-cannabis ethengiwe, yabanjwa, yathengiswa, noma ilahlwa. Kufanele futhi balondoloze wonke ama-invoice, amarekhodi okuthengisa, izikweletu namanye amaphepha afanelekile ahlobene nokuthenga ukuthengisa nokubeka i-cannabis.
Le mibhalo yokuthenga kufanele igcinwe ezindaweni ezinamalayisense isikhathi esingaphansi kwezinsuku ezingama-90 kusukela ngosuku lokuthenga ngaphandle kokuthi kukhona okweqile ovela eMnyangweni wezimali owethulwe ngokubhala.
Imibhalo kufanele futhi ibe khona emagcekeni ngezikhathi zomsebenzi ezijwayelekile futhi kufanele itholakale ukuze ihlolwe ngabasebenzi boMnyango nabenzeli abagunyaziwe.
Abasebenzi boMnyango banamandla okubopha, baseshe amabhizinisi e-cannabis, noma bamba insangu kumthengisi ohlukumeza noma yikuphi ukuhlinzekwa kwalesi senzo.
Izintela ezibekwe kuma-cannabis ukulawula ukusetshenziswa kwayo e-Illinois zibekelwa ngqo kumlimi nomthengi we-cannabis. Umlimi we-cannabis ukhokha i-Cannabis Cultivation Privilege tax e-Illinois ukuze athole ilungelo lokuthola isivuno, ngenkathi umthengi ekhokha i-Cannabis Purchaser Excise tax e-Illinois ukuthola ilungelo lokusebenzisa insangu.